My World: ကျွန်တော်သေတဲ့အခါ
Posted by PhyoPhyo at Thursday, October 15, 2009 Labels: ကျွန်တော်သေတဲ့အခါ, ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို
ဂျီးစ် Jeezzz .. မကြည့်ချင်ပါဘူး၊
မကြည့်ချင်ဘူးဆိုပေမယ် မျက်လုံးတွေကို အစွမ်းကုန်ချဲ့ပြီး ပုံတွေအကုန်သေချာကိုကြည့်လိုက်မိသေးတယ်။
အသုဘအခမ်းအနားတစ်ခုက ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဆန့်ဆန့်ရန့်ရန့်ပုံတွေကိုပေါ့။ မကြောက်တတ်လှပေမဲ့ ပုံတွေကိုမျက်လုံးထဲကမထွက်ဘူး။
လူတွေကို ဘာလို့များ ဒီလို ပုံကြီးတွေချပြပြီး စိတ်ညစ်ညူးစေကြလဲ။
တကယ်ပါ ... ကျွန်တော်သေရင်တော့ လူတွေရှေ့မှာ ဘယ်နေရာက ကြည့်ကြည့် ကြည့်လို့မလှတဲ့ ကျွန်တော့် ရဲ့အသက်မရှိတော့တဲ့ ရုပ်အလောင်းကြီးကို မကြည့်စေချင်ပါဘူး။
ခေါင်းတလား အနက်ရောင် ဒါမှမဟုတ် အဖြူရောင် တခါတည်းပိတ်ထားလိုက်မယ်။ အားနာပါးနာဟန်နဲ့ မျက်နှာတွေကိုအစွမ်းကုန်အပြိုင်အိုမင်းထားကြပြီး မိတ်ကပ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးအရာကြီးကို အသေအချာစိုက်ကြည့်။ ဒီကြားထဲ စိတ်မထင်ရင် စိတ်မထင်သလို ကျွန်တော့်အလောင်းကောင်ကြီးကို ရွှတ်ခနဲ နှုတ်ဆက်အနမ်းပေးကြမယ့်သူတွေလဲ ရှိဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပြောရဲတယ် အဲဒီလိုနမ်းရှုံ့လိုက်တဲ့အခါ လူတိုင်း အသက်အောင့်ထားကြမှာပဲ။ ဒါကို ကျွန်တော်သိတယ်။ ဘာလုပ်မှာလဲ၊ အဲဒီလို အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေ ကျွန်တော်သိပ်မုန်းတယ်။
လူတွေကို မဟုတ်မဟပ်အလုပ်တွေနဲ့ အလုပ်မရှုပ်စေချင်ဘူးဗျ။
ကျွန်တော့်အလုပ်က ဥပမာဗျာ IT ပွဲတစ်ခုရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ Presentation တွေကို animate တွေလုပ်၊ ပုံတွေကိုဟိုက၀င် ဒီကထွက် လုပ်ပြရတာမျိုးကိုဗျ။
ဒီတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့အသုဘ အခမ်းအနားမှာဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ငယ်ငယ်က ပုံတွေကစပြီး၊ ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ၊ ကျွန်တော်က ဘယ်လိုလူမျိုး၊ ခပ်ကြောင်ကြောင်လူဆိုရင် ဘယ်လောက်ထိကြောင်တယ်ဆိုတာ projector နဲ့ပြမယ်။ အင်မတန်နောက်ပြောင်တတ်တဲ့သူဆိုရင် ဘယ်လိုနောက်တတ်တယ်ကအစ ဘယ်သူတွေအစအနောက်ခံခဲ့ရတယ်အဆုံး မြင်အောင်ပြမယ်ဗျ။ ကျွန်တော်က ပုံဆွဲတာကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ ဘာတွေဆွဲခဲ့တယ်။ ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီ၊ ဘာတွေကိုလုပ်ဖို့ရှိတယ်၊ သေတဲ့အချိန်ကကြိုမသိနိုင်တော့ မလုပ်ရသေးတာတွေရှိနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ နောက် သူ ဘယ်သူတွေကိုချစ်တယ်၊ သူ့ကိုသူငယ်ချင်းတွေကနာမည်ပြောင်ဘယ်လိုပေးထားတယ်။ ဒါတွေကို ဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲပြမယ်။ font တွေကိုလဲ လှလှပပလေးတွေသုံးဦးမယ်။
သူ ဘာသီချင်းတွေကြိုက်လဲ ဒါတွေလဲပြထားမယ်။ အသုဘအခမ်းအနားလာတဲ့လူတွေ မပျင်းမရိရအောင်၊ စိတ်မညစ်ညူးစေအောင်၊ ငိုချိန်ကိုမရအောင် ဖမ်းစားထားချင်တယ်။
အဲဒီထဲမှာတော့ ကျွန်တော့်ကြောင့် စိတ်ညစ်ခဲ့ရသူတွေ။ ကျွန်တော့်ကိုစိတ်ညစ်အောင်၊
ငိုရအောင်လုပ်ခဲ့ကြသူတွေ ... ဒီလူတွေကိုတော့ ဖျောက်ထားလိုက်မယ်။ စိတ်ရှုပ်ကုန်ကြမှာစိုးရိမ်လို့ပါ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ အသုဘမှာဆိုရင် free style နဲ့လာနိုင်တယ်။ အနက်ရောင်တော့ဝတ်ခဲ့ကြပါ။ အနက်ရောင်ယဉ်ကျေးမှုတွေစီးမြောနေတဲ့ underground show တွေကို ကျွန်တော်ကသိပ်ကြိုက်တယ်ဗျ ...လူငယ်တွေရဲ့ ရိုးသားမှုတွေကို အမည်းရောင်မည်းမည်းသိပ်သိပ်တွေထဲမှာ လင်းလင်းထင်းထင်းမြင်ရလွန်းလို့။
ရောခ့်ဘိုးအေကြီးတွေရဲ့ show တွေမှုာ တစ်ခါတစ်ရံတွေ့ရတတ်တဲ့ ရန်လိုမှုတွေ လူငယ်တွေကြားမှာ မရှိကြတာ ကျွန်တော့်မှာ အဆန်းတကြယ်ကိုဖြစ်လို့ ... ဒါကိုကြိုက်တယ်။
disco သွားရတာကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ disco ခန်းမထဲကို ၀င်လာသလို
ပေါ့ပေ့ါပါးပါးဟန်နဲ့ဝင်လာစေချင်သေးတယ်။ mp3,mp4,iPod ကြိုက်တာယူလာကြဦးဗျာ။ သီချင်းတွေလဲနားထောင်ကြပါဦး၊ ရတယ်။ သိပ်တော့ မငိုကြပါနဲ့၊ အသံထွက်မငိုကြေး၊
ကဲ ... ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။
အဲဒီငွေတွေကိုတော့ မိဘမဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးတွေကို လှူပေးပါမယ်။အိမ်မှာဆိုရင်လဲ အသုဘအိမ်မှာ ဖဲရိုက်တတ်တဲ့အလေ့အထကိုဖျောက်ပစ်ချင်တယ်။
နောက် ကွာစေ့ ... ဘာလို့ကွာစေ့ပဲကျွေးကြတာလဲ စားရတာလဲခက် အမှိုက်ကလဲပွသေးတယ်၊
ကျွန်တော်က လူတွေကိုမေးမယ် ၀ီစကီကြိုက်သူကို ၀ီစကီတိုက်မယ်၊ ၀ိုင်သောက်မလား ရတယ်။
လဘက်ရည်၊ကော်ဖီ မေးပြီးမှ ကျွေးစေမယ်။ မုန့်လဲ ရရမှာပေါ့။ အသုဘအခမ်းအနားတွေမှာ ပန်းခြင်းတွေကို ကြည့်ရတာကြိုက်တယ်။ ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့လာရင် ပန်းခြင်းလှလှလေးတွေယူခဲ့ပေးကြပါ။ ပန်းတွေက ဈေးကြီးပေမဲ့ ဒီလောက်တော့လုပ်ပေးကြပေ့ါဗျာ။ ကျွန်တော့်ကိုတကယ်ချစ်ကြတယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသုဘအခမ်းအနားကပြန်ထွက်လာကြသူတွေ လက်ထဲကို တန်ဘိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု အသေအချာ ထည့်ပေးလိုက်မှာပါ။
အဲဒါကတော့ လူလူချင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အပြည့်အ၀ထားနိုင်ကြဖို့ ရိုးသားပြီးသစ္စာရှိကြဖို့ အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်မယ့်
အဲဒီပစ္စည်း ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ ခင်ဗျားလာခဲ့ရင် သိရမှာပေါ့ ...
၂၀၀၈ သြဂုတ်လ၊ ဇီဝကမဂ္ဂဇင်း - “မငိုကြေး”
“ကျွန်တော်သေတဲ့အခါ” စိတ်ကူးတွေကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီ။ ဖတ်နေရင်း “ငါသေတဲ့ခါကျရင်လည်း..” လို့ စိတ်တွေကူးမိကုန်ပြီ.... ကဲ!
ကျန်နေရစ်တဲ့လူတွေကို တော်တော်အလုပ်ရူတ်ပြီးအကုန်အကျများစေမဲ့ အသုဘပဲ...သေတာတောင် ဒုက်ခပေးဖို့ကြံစည်နေသေးတယ်...ဆိုးလိုက်တာ..:-) ကြောက်တတ်တတ်သူတွေအတွက်တော့ ဒီရုပ်ကြီးပြန်မမြင်ရလို့ တော်တော်ကံကောင်းမယ်....:-)
မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံအတွက် တာဝန်ယူပါရစေ။
အင်း. . .သေတဲ့အခါကျရင်. . .ဖိတ်စာပါရိုက်ပြီးပို့လိုက်. . .
Funeral Project အသစ်နဲ.လာတိုးနေတယ် ၊ လာရအောင်လဲ တော်တော်နဲ. မလာရ လောက်ပါဘူး ၊ ဟီး .....
မဆိုးပါဘူး .. တစ်ခုဘဲ ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲ အစီစဉ်လေးပါ ထည့်ပေးရင်ကောင်းမယ် .. ပြီးတော့ underground show ပါ အပြင်မှာလုပ်ထားပေးလိုက်ရင် ပိုလန်းတာပေါ့
စိတ်ဝင်းစားစရာပဲ မကြူံစဖူး အထူးအဆန်း မ်ု့့အခုတောင်သေခိုင်းချင်စိတ်ပေါက်မိတယ် :P
အင်း အဲ့ခါကျရင်ခေါ်လိုက် လာခဲ့မရ် အတော်ပျော်ဖို့ကောင်းမရ့်ပုံပဲ :P
လန်းတယ်ကွာ... အဲလို အသုဘမျိုး တီထွင်ကြည့်စမ်းချင်တယ်း)
တော်တော်တော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ့် Funeral ပဲ။
တကယ်ပါ .. နောက်တစ်ကြိမ် ဖြူဖြူ့ကို မစတော့ပါဘူး ..
ပေါပ့်ဘုရင်မ မက်ဒေါနားရဲ့ ဘဲလ်ဂရိတ်ည
Do you like Belgrade?